Kulan ku saabsan xoojinta xiriirka hawlwadeenada caafimaadka oo ka furmay cisbitaalka guud ee Galkacyo. – Radio Daljir
Kulan ku saabsan xoojinta xiriirka hawlwadeenada caafimaadka oo ka furmay cisbitaalka guud ee Galkacyo.
Nofeembar 5, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Nov 05 – Waxaa maanta isbitaalka guud e magaalada Galkacyo ka furmay kulan socon doono muddo dhowr maalmood, kaasi oo ku saabsan xoojinta xiriirka hawlwadeennada caafimaad ee ka hawlgala magaalada Galkacyo.
Kalankaasi oo ahaa mid lagu lafo gurayey sare u qaadidda adeegyada caafimad, xiriirka iyo iskaashiga dhammaan hawlwadeennada caafimaadka ee gobolka ka shaqeeyaa ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas?uuliyiin kala duwan oo ka socotay hay?adaha caafimaadka ee gobolka ka hawlgala iyo mas?uuliyiin ka soctay hay?adaha iyo dawladda Puntland.
Mas?uuliyiinta maanta ka soo qaybgalashay kulanka lagu xoojinayey xiriirka iyo iskaashiga hawlwadeennada caafimaadka ee magaalada Galkacyo waxaa ka mid ahaa wasiirka caafimaadka ee dawladda Puntland Dr. Bashiir Cali Biixi, agaasimayaal caafimaad, dhakhaatiirka waaweyn ee magaalada Galkacyo ka hawlgala sida Dr, Maxamed Jaamac Salaad, Dr. C/qaadir Maxamuud Jaamac ?Dhaga cadde? Dr. Caynshe, Dr. Maymuun Faarax Samatar, oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo, mas?uliyiinka soctay maamulka gobolka, madaxada hay?daha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah iyo hawlwadeenno caafimaad oo aad u tiro badan.
Wasiirka caafimaadka ee dawladda Puntland Dr. Bashiir Cali Biixi oo kulankaasi ka hadlay ayaa taabtay baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka Mudug, wuxuuna sheegay sida ay laga maarmaan u tahay in cidkasta ay gacan ka gaysto illaalinta caafimaadka deegaanka sare u qaadida saxada gobolka.
Wasiirku waxaa uu sheegay wasaarad ahaan in ay sameeyeen dadaalo dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada caafimaad ee Puntland oo dhan wuxuuna si gaar ah u xusay magaalada Galkacyo oo uu carabka ku adkeeyey in ay jiraan xiriir ay wasaarad ahaan la sameeyeen hay?addii MSF ee horay gacanta ugu hayn jirtay isbitaalka magaalada Galkacyo taas oo uu sheegay in ay ka ogalaatay in ay dib ugu soo laabato isbitaalka magaalada Galkacyo.
Dhanka kale dhakhaatiirtii maanta ka qaybgalay kulankaasi ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey xaaladda caafimaad ee gobolku hadda sida ay tahay iyo dhakhaatiir ahaan dawrka ay ku leeyihiin sara u qaadidda adeegyada caafimaad ee ay bulshadu u baahan yihiin, waxaana midkasta uu si gaar ah u sharaxay xarunta uu ka hawlgalo iyo adeegyada ay dadka u fuliso.
Mudda dhawrka maalmood ah ee kulankaani uu socon doono, waxaa lagu wadaa in la isla gorfeyn doono arrimo badan oo ku aaddan jihaynta adeegyada caafimaadka ee gobolka Mudug gaar ahaan midda magaalada Galkacyo.
Farxaan Jeemis Cabdulle?
5 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena waa ay ku dhawacmeen weerar lagu qaaday gaari rakaab ah magaalada Muqdisho.
?Maxkamada gobolka Bari oo 15 sanno ku xukuntay naakhuude doonidiisa ay ku dhinteen 41 tahriibayaal ah.